ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံမှုအရှိဆုံးသို့မဟုတ်အလျင်မြန်ဆုံးအရာသည်သင်၏လက်ဗွေကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ဆောင်ရွက်ရန်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှဖြတ်သန်းသွားသည် အချို့သောအခြားစီမံကိန်း။
ဤအဝေးမှအမှန်တရားမှာ၊ ဒီဂျစ်တယ်ကိရိယာအမျိုးအစားမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုလေ့လာခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာထက်ပိုနိုင်သည်၊ စီမံကိန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်အတွက်သင်ရှင်းပြချင်သည်။ သင်၏လက်ဗွေကို အသုံးပြု၍ သော့ဖွင့်နိုင်သည့်သင်၏ကားဂိုဒေါင်တံခါးအတွက်အီလက်ထရောနစ်သော့ခတ်တစ်ခုကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း.
2.1 အဆင့် ၁ - စနစ်တစ်ခုလုံးကိုဝါယာကြိုးနှင့်စစ်ခြင်း
2.2 အဆင့် ၂ - Controller များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း
2.3 အဆင့် ၃။ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းသည်
2.4 လှမ်း 4. စနစ်အသုံးပြုခြင်း
အနည်းငယ်ပိုပြီးအသေးစိတ်သွားပြီးဒီစီမံကိန်းအတွက်ငါတို့ကaSparkFun GT-511C1R ကဲ့သို့သောလက်ဗွေစကင်နာ။ ဤသင်ခန်းစာအမျိုးအစားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးသည်အလွန်ဆင်တူသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရှိသည်ကိုသတိရသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းပုံစံအတိအကျဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဤစီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဝံ့သော်လည်းသင်၌ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိပါကအသုံးပြုသောလက်ဗွေစကင်နာသည်သင်ခန်းစာမှသို့မဟုတ်သင်၏ကားဂိုဒေါင်တံခါးသည်အခြားစနစ်များကိုသာအသုံးပြုသည်နှင့်တူသည်။ ကြောက်ရွံ့ရမည်၊ သင်ဤသင်ခန်းစာကိုသင်လိုက်နာနိုင်သော်လည်း၊ သငျသညျအခြို့သောအခြားပြုပြင်မွမ်းမံစေရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် သင်၏ hardware နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် wiring နှင့် code ကိုယ်နှိုက်နှစ်ခုလုံးတွင်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၁ - စနစ်တစ်ခုလုံးကိုဝါယာကြိုးနှင့်စစ်ခြင်း
သင်၏လက်ချောင်းများ၏လက်ဗွေကြောင့်သင်၏ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်ရန်၊ သင့်တွင်ကွဲပြားသောအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုလိုအပ်သည်။ တဖကျတှငျကြှနျုပျတို့လိုအပ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့အိမ်အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်မည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် control panel ကိုထုတ်လုပ်ပါ။ ဒီ control panel ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာလက်ဗွေစကင်နာ၊ သတင်းအချက်အလက်မျက်နှာပြင်သေးသေးလေးနှင့်နောက်ထပ်ခလုတ်အချို့တပ်ဆင်မည့်နေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
ဒုတိယ၊ ကားဂိုဒေါင်သူ့ဟာသူဒုတိယ box ကို install လုပ်ပါ။ ၎င်းသည် control panel တွင် ၀ င်ရောက်သောလက်ဗွေကိုစနစ်မှလက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ မှန်ကန်သောစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်ပေးမည့်မော်တာမှအချက်ပြသောအချက်ပြကိုဆက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒီထွက်သယ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှာ ATMega328p microcontroller လိုအပ်ပါတယ် ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်အပြင်ဘက်မှာတပ်ဆင်မယ့် control panel ကိုအသက်ပေးဖို့တာဝန်ရှိလိမ့်မယ်။ \_ t အတွင်းပိုင်း panel အတွက် ATTiny ကိုလောင်းမည်။ ပျဉ်ပြားနှစ်ခုသည်အမှတ်စဉ်ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့်အချင်းချင်းဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ စနစ်တစ်ခုလုံး၏လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် ATTiny ကဒ်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ပစ်နိုင်ရန် polarized transmitter ကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ vandal သည်အပြင်ဘက် control panel ကိုစဖွင့်ပါက၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားဂိုထောင်တံခါးကိုကေဘယ်ကြိုးတစ်ချောင်းကို ဖြတ်၍ မဖွင့်နိုင်တော့ပါ။
အကယ်၍ ဤစီမံကိန်းကသင့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစေပြီးသင်ဤစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သင်စိတ်ဝင်စားပါက၊ သင်လိုအပ်မည့်အစိတ်အပိုင်းများစာရင်းဖြစ်သည်။
GT-511C1R လက်ဗွေစကင်နာအတွက် JST connector
၁၀ UF capacitor (၂ ယူနစ်)
10 kOhm resistor (၃ ယူနစ်)
100 ohm resistor (၃ ယူနစ်)
Pushbutton (၃ ယူနစ်)
28 နှင့် 8 pin IC connectors သည် soldering လုပ်သည့်အခါ microcontroller များအားကာကွယ်ရန်နှင့်ပရိုဂရမ်အတွက်အလွန်လွယ်ကူစေရန်ကူညီလိမ့်မည်
control panel ကေဘယ်လ်ကြိုးများကိုအတွင်းပိုင်းသေတ္တာနှင့်မချိတ်ဘဲဂဟေဆက်ခြင်းမရှိဘဲချိတ်ဆက်ရန်
AC to DC converter ဥပမာဖုန်းအားသွင်းစက်ကိုသုံးနိုင်သည်
ဤအချိန်တွင်စာရင်းရှိ hardware အားလုံးကိုဆက်သွယ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးကသင်သေချာပေါက်စိတ်ကူးယဉ်နေသလိုပါပဲ ဤလိုင်းများအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံကိုလိုက်နာပါcontrol panel နှင့်အတွင်းပိုင်း module နှစ်ခုလုံး၏ layout ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့အကြံပေးချက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိ converter နှင့် LCD နှစ်ခုလုံးရဲ့အရှည်ကိုအရှည်အတိုင်းအတာတစ်ခုပေးရန်သင်ကသူတို့ကိုဆွဲထားနိုင်ပြီးအပြင်ဘက်ရှိ watertight box အတွင်း၌ရှိသည်ဟုထင်မြင်သည့်မှန်ကန်သောအနေအထားတွင်ပြင်ဆင်ပါ။
အကယ်၍ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Controller နောက်ဆုံးတွင်လုပ်ဆောင်မည့်ကုဒ်ကိုခဏစစ်ဆေးလျှင်၊ ခလုတ်များသည် pins 12, 13 and 14 နှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ 'ဆိုက်ရောက်','OK'and'အောက်'' အသီးသီး။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄ င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အညီအမြင်အာရုံဆိုင်ရာယုတ္တိဗေဒကိုပိုမိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်၎င်းတို့အားဤနည်းဖြင့်ထားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။
system တစ်ခုလုံးသို့ current ကို supply ရန် microUSB connector ပါသည့်တယ်လီဖုန်း charger ကိုလိုအပ်သည့် element များစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဤ charger type ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ၄ ​​င်းတို့သည်အလွန်စျေးပေါပြီးရှာဖွေရလွယ်ကူသောအချက်ကိုအခြေခံအားဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။။ အခြားကွဲပြားသောအတွေးအခေါ်တစ်ခုမှာ Controller များအားဘက်ထရီများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စွမ်းအင်ကိုရယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်တွင်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာသည်များသောအားဖြင့်လက်ရှိသုံးစွဲသောစနစ်နှင့်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွေးမွေးသောကြောင့်၎င်းသည်လက်ရှိလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုပြောင်းလဲရန် current transformer ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ကသူတို့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်နိုင်ဘက်ထရီနှင့်အတူနိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၂ - Controller များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း
အထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာပြောပါ ATMega328p နှင့် ATTiny85 မှလုပ်ဆောင်မည့်ကုဒ်နှစ်ခုလုံးကို Arduino IDE နှင့်ရေးသားပြီးပြုစုထားသည်။။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ATMega328p ရှိ garagefinger.ino ဖိုင်နှင့် ATTiny85 ရှိ tiny_switch.ino ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ NokiaLCD.cpp နှင့် NokiaLCD.h စာကြည့်တိုက်များသည် LCD မျက်နှာပြင်အတွက်စာကြည့်တိုက် ၂ ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို Arduino site မှရယူထားသောဥပမာများမှစုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ စာကြည့်တိုက်အားလုံးနီးပါးကဲ့သို့ပင်ဖိုင်တွဲအတွင်းထားသင့်သည် 'စာကြည့်တိုက်သင့်ရဲ့ Arduino IDE ကိုရှာပါ။ ဤဖိုဒါသည်သင် IDE ထည့်သွင်းထားသော root မှသာမန်အားဖြင့် Windiows တွင်ဖြစ်သည် "% HOMEPATH" \_ စာရွက်စာတမ်းများ \_ Arduino \_ စာကြည့်တိုက်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဤလိုင်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော download လုပ်ရန်ဖိုင်များကိုထားခဲ့ပါ:
ထို့အပြင်လက်ဗွေစကင်နာအလုပ်လုပ်ရန်စာကြည့်တိုက်များလည်းလိုအပ်သည်။ ဒီနေရာမှာကံမကောင်းတာကိုသတိရပါ SparkFun ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစာကြည့်တိုက်များသည် GT-511C3 မော်ဒယ်အတွက်တီထွင်ထားသောကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။၊ ပိုမိုစျေးကြီးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောဗားရှင်းအတွက်မဟုတ်၊ ရှာဖွေရန် ပို၍ ခက်ခဲသော်လည်းအလွန်စျေးသက်သာသည်။ GT-511C1R အတွက်အလုပ်လုပ်နေသောစာကြည့်တိုက်များကိုတွေ့နိုင်သည် github.
ဖိုင်အားလုံးကို download လုပ်ပြီးသင်လိုချင်တဲ့ code ကိုကြည့်ပြီးလျှင် စနစ်ပိုမိုလုံခြုံ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖြစ်ရပ်များကိုရှာပြီးအစားထိုးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းပါသည်။ '။'သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်အားဖြင့်။ သင်၏ system ကိုပိုမိုလုံခြုံအောင်လုပ်နိုင်သည့်နောက်ထပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်မှာ tiny_switch.ino ဖိုင်ရှိ buf variable ကိုသင်အသုံးပြုလိုသောစကားဝှက်နှင့်အရှည်တူတူဖြစ်သည်။
Variable အချစ်ရယ်, garagefinger.ino ဖိုင်တွင်သတ်မှတ်ထားသော၊ အထက် / အောက်ခလုတ်သည်နှိပ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် 8-bit ကိုယ်စားပြုမှုရှိသည် သင်၏ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်ပြီးလက်ဗွေအသစ်များကိုစနစ်တကျသိရှိရန်လက်ဗွေကိုအသုံးပြုစရာမလိုဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုသည့်အတွက်စကင်နာမှတ်ဉာဏ်သည်လွတ်သွားလိမ့်မည်။ ဒီကန ဦး တန်ဖိုးကိုပြောင်းဖို့စိတ် ၀ င်စားလိမ့်မည်။
အဆင့် ၃။ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းသည်
ကျနော်တို့စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီးတာနဲ့နောက်ဆုံးစည်းဝေးပွဲအတွက်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် control panel တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ watertight box အတွင်း၌တပ်ရမည်။ ပုံများတွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းမည်သူမှထိန်းချုပ်သူကိုမျှမ ၀ င်နိုင်စေရန်၊ watertight box အပြင် acrylic box ကိုအသုံးပြုထားပြီး LCD screen နှင့် access ခလုတ်များကိုသာတပ်ဆင်လိမ့်မည်။ ဒီ box ရဲ့အတွင်းပိုင်းတွင် install လုပ်ထား။
ဤ box ကိုသင်၏အိမ်အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ ATTiny ကိုတပ်ဆင်မည့် box သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရမည်။ ဤအချက်၌, သတိရသင့်တာကတော့ ATTiny မှာမင်းရဲ့ကားဂိုဒေါင်တံခါးဖွင့်ပေးတဲ့မော်တာကိုအချက်ပြဆက်သွယ်ဖို့ကေဘယ်ကြိုးတွေချိတ်ဆက်ရမယ်။ ကျွန်တော့်အမှု၌ကျွန်ုပ်အတွက်လွယ်ကူသည်။ ကားဂိုဒေါင်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်သောနံရံပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တွန်းအားပေးသောခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။
လှမ်း 4. စနစ်အသုံးပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ system တစ်ခုလုံး install လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင် LCD screen နှင့် fingerprint scanner နှစ်ခုလုံးကိုထွန်းလင်းရန် button သုံးခုကိုနှိပ်ပါ။ စကင်နာပေါ်တွင်သင်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းမချမှီတိုင်အောင်ဤအချိန်တွင်စက်သည်စောင့်နေသည်။ သင်စကင်နာပေါ်တွင်သင်ထားသည့်လက်ချောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုပါက၊ တံခါးဖွင့်လာလိမ့်မည် တံခါးကိုထပ်ဖွင့် / ပိတ်ရန်၊ လက်ဗွေရာများကိုထည့်ရန် / ဖျက်ရန်၊ မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကိုပြောင်းလဲရန်မီနူးတစ်ခုကိုပြသလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးသော့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်စက်ပစ္စည်းသည် ၈ စက္ကန့်ခန့်တွင်ပိတ်သွားသည်။ စောင့်ဆိုင်းနေသောကြာချိန်ကိုပြောင်းရန် function ကိုသင်ပြုပြင်ရမည် မင်္ဂလာပါ အဆိုပါ garagefinger.ino ဖိုင်ထဲမှာ။
ယခင်စာပိုဒ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အပေါ် / အောက် core များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင် override sequence ကိုသုံးနိုင်သည်။OK'' စနစ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်။ ဤအရာသည်စက်ပစ္စည်းကိုသင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်သည့်အချိန်တွင်အသုံးဝင်သည်။ အကြောင်းမှာစကင်နာသည်၎င်း၏မှတ်ဉာဏ်တွင်လက်ဗွေများမရှိပါ။ ကန ဦး အစီအစဉ်ကို variable ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နံပါတ်ရဲ့ 8-bit binary ကိုယ်စားပြုမှုကပေးထားတယ် ကုဒ်ကိုအစားထိုးပါ garagefinger.ino ဖိုင်တွင် '1' ကို 'up' ခလုပ်ဖြင့် '0' ကို 'down' ခလုတ်ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောနေရာတွင်.
သတိရရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ၊ အကယ်၍ သင်သည် override sequence ကိုပြောင်းလဲပြီး၎င်းကို device သို့ fingerprints များထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲမေ့သွားလျှင်၎င်းသည်ထိရောက်စွာသော့ခတ်သွားလိမ့်မည်။ သင် ATMega328p ကိုပြန်လည်ပရိုဂရမ်နှင့် EEPROM ကိုဖျက်ပစ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုရလိမ့်မည်။ ပစ္စည်း။ ကုဒ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » သင်၏လက်ဗွေကြောင့်သင့်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်နိုင်သည့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အီလက်ထရောနစ်သော့ခတ်ပါ